Iza no Mitarika ny Vahoakan’Andriamanitra Ankehitriny?
“Tsarovy ireo mitarika eo aminareo.”—HEB. 13:7.
HIRA: 125, 43
Inona no porofo fa nahazo hery avy amin’ny fanahy masina ireo nitarika ny vahoakan’Andriamanitra taloha, ary toy izany koa ankehitriny?
1, 2. Inona no nety ho noeritreretin’ny apostoly, rehefa lasa tany an-danitra i Jesosy?
TEO amin’ny Tendrombohitra Oliva ny apostolin’i Jesosy, nibanjina ny lanitra. Vao avy nahita an’ilay namany sy tompony lasa any an-danitra izy ireo. Notakonan’ny rahona izy ka tsy tazana intsony. (Asa. 1:9, 10) Nampianatra sy nampahery ary nitarika azy ireo nandritra ny roa taona teo ho eo izy. Ahoana izao no hataon’izy ireo satria tsy eo intsony izy?
2 Hoy i Jesosy tamin’ny mpanara-dia azy: “Ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary any amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany ianareo.” (Asa. 1:8) Ahoana no hahavitan’izy ireo an’izany? Marina fa nampanantena i Jesosy hoe hahazo fanahy masina ry zareo. (Asa. 1:5) Tsy hahavita hitory eran-tany anefa izy ireo, raha tsy mahazo tari-dalana sy misy mandamina ny asa. Nampiasa ny solontenany i Jehovah talohan’izay, mba hitari-dalana sy handamina ny vahoakany. Nety ho nieritreritra àry ny apostoly hoe: ‘Hanendry mpitarika vaovao ve i Jehovah?’
3. a) Inona no fanapahan-kevitra lehibe noraisin’ireo apostoly? b) Inona no hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity?
3 Nifidy an’i Matia mba ho apostoly faha-12 ny mpianatr’i Jesosy, tapa-bolana latsaka kely taorian’izay. Nandinika ny Soratra Masina sy nangataka tari-dalana tamin’i Jehovah izy ireo vao nanapa-kevitra. Natao solon’i Jodasy Iskariota i Matia. (Asa. 1:15-26) Tena nilaina izany satria tokony ho 12 ny apostoly. * Tsy nifidy azy ireo mba hiaraka aminy hitory fotsiny i Jesosy, fa mba hanao andraikitra lehibe eo anivon’ny vahoakan’i Jehovah. Inona izany andraikitra izany, ary ahoana no nanampian’i Jehovah sy Jesosy azy ireo mba hahavita an’ilay izy? Iza ankehitriny no manao andraikitra mitovy amin’ny nataon’ireo apostoly? Ahoana no ampisehoantsika fa mahatsiaro an’ireo mitarika eo amintsika isika, indrindra fa ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina”?—Heb. 13:7; Mat. 24:45.
I JESOSY NO NITARIKA NY FILAN-KEVI-PITANTANANA
4. Inona no andraikitr’ireo apostoly sy anti-panahy tany Jerosalema tamin’ny taonjato voalohany?
4 Nanomboka niandraikitra ny fiangonana kristianina ireo apostoly, tamin’ny Pentekosta taona 33. “Nitsangana” teo anatrehan’ny olona maro be “i Petera sy ny iraika ambin’ny folo lahy” tamin’izay, ary nampianatra azy ireo ny fahamarinana. (Asa. 2:14, 15) Maro tamin’izy ireo no lasa Kristianina. “Nifantoka tamin’ny fampianaran’ny apostoly izy ireo” taorian’izay. (Asa. 2:42) Andraikitry ny apostoly ny nitantana ny volan’ny fiangonana. (Asa. 4:34, 35) Nikarakara ny ara-panahin’ny fiangonana koa izy ireo, ka nilaza hoe: ‘Hifantoka amin’ny vavaka sy ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra izahay.’ (Asa. 6:4) Naniraka Kristianina efa za-draharaha koa izy ireo mba hitory ny vaovao tsara tany amin’ny faritany mbola tsy nalehan’izy ireo. (Asa. 8:14, 15) Nisy anti-panahy voahosotra hafa tatỳ aoriana nanampy ny apostoly hiandraikitra ny fiangonana. Ireo anti-panahy ireo sy ny apostoly no filan-kevi-pitantanana tamin’izany, ary nanome toromarika ho an’ny fiangonana rehetra izy ireo.—Asa. 15:2.
5, 6. a) Inona no porofo fa nahazo hery avy amin’ny fanahy masina ny filan-kevi-pitantanana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Ahoana no nanampian’ny anjely azy io? d) Inona no mampiseho fa nitari-dalana azy io ny Tenin’Andriamanitra?
5 Fantatr’ireo Kristianina voalohany hoe i Jehovah no nitarika ny filan-kevi-pitantanana, ary nampiasa an’i Jesosy izy mba hitarihana azy ireo. Misy antony maromaro nahatonga azy ireo hatoky an’izany: Voalohany, nahazo hery avy amin’ny fanahy masina ny filan-kevi-pitantanana. (Jaona 16:13) Marina fa nahazo fanahy masina daholo ny Kristianina voahosotra. Ny apostoly sy ny anti-panahy hafa tany Jerosalema anefa no tena nampian’izy io mba hahavita ny andraikiny. Nanampy azy ireo hanapa-kevitra, ohatra, ny fanahy masina tamin’ny taona 49. Nisy adihevitra momba ny famorana tamin’izay. Nanaraka ny tari-dalan’io filan-kevi-pitantanana io ny fiangonana, ka ‘nihanatanjaka ny finoany ary nihamaro isan’andro ireo olona teo anivony.’ (Asa. 16:4, 5) Hita tao amin’ny taratasy nisy an’ilay fanapahan-kevitra fa nanana ny vokatry ny fanahy ilay filan-kevi-pitantanana. Be fitiavana sy nanam-pinoana izy ireo.—Asa. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.
6 Faharoa, nampian’ny anjely ny filan-kevi-pitantanana. Anjely, ohatra, no nahatonga ny apostoly Petera hankany amin’i Kornelio. Nitory taminy sy ny havany i Petera, dia nahazo ny fanahy masina izy ireo avy eo na dia tsy voafora aza. I Kornelio no voalohany tamin’ireo hafa firenena tsy voafora lasa Kristianina. Nanaiky ny sitrapon’Andriamanitra ny apostoly sy ny rahalahy hafa taorian’izay, ka noraisin’izy ireo tsara izay hafa firenena tsy voafora lasa anisan’ny fiangonana kristianina. (Asa. 11:13-18) Nanampy ny filan-kevi-pitantana hiandraikitra ny asa fitoriana koa ny anjely. Nanohana sy nanafaingana an’izany asa izany izy ireo. (Asa. 5:19, 20) Fahatelo, nitari-dalana ny filan-kevi-pitantanana ny Tenin’Andriamanitra. Nanaraka an’izay voalazan’ny Soratra Masina foana ireo anti-panahy voahosotra ireo, rehefa nanapa-kevitra momba ny zavatra inoana sy nanome toromarika ho an’ny fiangonana.—Asa. 1:20-22; 15:15-20.
7. Nahoana isika no afaka milaza hoe i Jesosy no nitarika ny Kristianina voalohany?
7 Nanana fahefana teo anivon’ny fiangonana ny filan-kevi-pitantanana. Nekeny anefa fa i Jesosy no Mpitarika. Nilaza ny apostoly Paoly fa i Kristy no nanendry “ny sasany ho apostoly”, ary izy no lohan’ny fiangonana na Mpitarika azy io. (Efes. 4:11, 15) Tsy anarana apostoly malaza no niantsoana ny mpianatr’i Jesosy. Nantsoina hoe Kristianina kosa izy ireo, “noho ny fitondran’Andriamanitra.” (Asa. 11:26) Neken’i Paoly hoe tena ilaina ny “mihazona mafy ny fampianarana” nampitain’ny apostoly sy ny lehilahy hafa nitarika teo anivon’ny fiangonana. Niorina tamin’ny Soratra Masina mantsy izy ireny. Nilaza anefa izy hoe: “Tiako ho fantatrareo fa i Kristy no lohan’ny lehilahy rehetra.” Anisan’izany ireo rahalahy anisan’ny filan-kevi-pitantanana. Hoy koa izy: “Andriamanitra kosa no lohan’i Kristy.” (1 Kor. 11:2, 3) I Jehovah àry no nanendry an’i Kristy Jesosy ho Mpitarika ny fiangonana.
“TSY ASAN’OLOMBELONA IO”
8, 9. Inona no andraikitra lehibe nataon’ny Rahalahy Russell, nanomboka tamin’ny 1870?
8 Te hanompo an’Andriamanitra mifanaraka amin’izay lazain’ny Baiboly i Charles Russell sy ny namany, nanomboka tamin’ny 1870. Tian’izy ireo hampiana hanao toy izany koa ny olona rehetra, na inona na inona fiteniny. Nanangana ny Fikambanana Tilikambo Fiambenan’i Ziona àry izy ireo, tamin’ny 1884, ka ny Rahalahy Russell no prezidà. * Tena nianatra tsara ny Baiboly izy, ary tsy natahotra nampahafantatra hoe diso ny fampianarana sasany, toy ny Andriamanitra telo izay iray sy ny fanahy tsy mety maty. Lasa fantany hoe tsy ho hita maso i Kristy rehefa hiverina, ary hifarana amin’ny 1914 “ny fe-potoana voatondro ho an’ny hafa firenena.” (Lioka 21:24) Tsy nitsitsy fotoana sy hery ary vola izy mba hampahafantarana an’izany rehetra izany. Niharihary àry fa nitari-dalana ny Rahalahy Russell i Jehovah sy Jesosy.
9 Tsy te hoderain’ny olona ny Rahalahy Russell. Hoy izy tamin’ny 1896: ‘Tsy mitady voninahitra na haja izahay, ary tsy tianay hohindrahindraina be ny zavatra nosoratanay. Tsy te hantsoina hoe Reverà na Raby koa izahay, sady tsy tianay raha misy antokom-pivavahana antsoina amin’ny anaranay.’ Niteny koa izy tatỳ aoriana hoe: “Tsy asan’olombelona io.”
10. a) Oviana i Jesosy no nanendry ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina”? b) Inona no lasa nazava tamintsika nanomboka tamin’ny 1971?
10 Maty ny Rahalahy Russell tamin’ny 1916. Nanendry ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina” i Jesosy, tamin’ny 1919, mba “hanome sakafo” ara-panahy “amin’ny fotoana mety” ho an’ny mpanara-dia azy. (Mat. 24:45) Rahalahy voahosotra vitsivitsy tao amin’ny foibe tany Brooklyn, any New York, no nikarakara sy nizara sakafo ara-panahy tamin’izany. Taorian’ny 1940 vao nanomboka hita tao amin’ny bokintsika ny teny hoe “filan-kevi-pitantanana.” Nihevitra isika hoe ny talen’ny Fikambanana Tilikambo Fiambenana no filan-kevi-pitantanana. Nohazavaina anefa tamin’ny 1971 fa tokony hiavaka tsara ireo, ary mba hahafahana manao zavatra ara-dalàna no nananganana an’ilay fikambanana. Nanomboka tamin’izay àry, dia tsy anisan’ny tale ao amin’io fikambanana io intsony izay rahalahy voahosotra anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Rahalahy anisan’ny “ondry hafa” tatỳ aoriana no lasa talen’izy io sy ny fikambanana hafa ampiasain’ny fandaminan’i Jehovah. Afaka mifantoka amin’ny fampianarana sy ny fanomezana tari-dalana ho an’ny vahoakan’i Jehovah àry ny Filan-kevi-pitantanana. (Jaona 10:16; Asa. 6:4) Nilaza Ny Tilikambo Fiambenana 15 Jolay 2013 fa antokona rahalahy voahosotra vitsivitsy ilay “mpanompo mendri-pitokisana sy malina”, ary izy io no Filan-kevi-pitantanana.
Ny filan-kevi-pitantanana, tamin’ny taona 1950 tany ho any
11. Ahoana no fomba fiasan’ny Filan-kevi-pitantanana?
11 Rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe horaisina, dia miara-manapa-kevitra ireo rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana. Ahoana no ataony? Mivory izy ireo isan-kerinandro, ka afaka mifampiresaka tsara ary lasa miray saina. (Ohab. 20:18) Mifandimby mitari-draharaha amin’ireny fivoriana ireny izy ireo isan-taona. Tsy misy ambony sy ambany mantsy izy ireo. (1 Pet. 5:1) Toy izany koa no ataon’izy ireo rehefa mivory ireo komity enina eo anivon’ny Filan-kevi-pitantanana. Izay rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana ao amin’ilay komity no mitari-draharaha, ary mifandimby manao an’izany izy ireo isan-taona. Tsy misy amin’izy ireo mieritreritra hoe izy no mpitarika. Samy anisan’ny “mpanompo ao an-trano” koa mantsy ireo rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, ka mandray sakafo ara-panahy sy tari-dalana avy amin’ny mpanompo mendri-pitokisana.
Manome sakafo ara-panahy ho an’ny vahoakan’Andriamanitra ny mpanompo mendri-pitokisana, hatramin’ny nanendrena azy tamin’ny 1919 (Fehintsoratra 10, 11)
12. Inona avy ny fanontaniana hovaliantsika?
12 Tsy miresaka mivantana amin’ny Filan-kevi-pitantanana Andriamanitra. Tsy mihevitra koa izy io hoe marina foana izay lazainy. Mety ho diso ihany àry ny fanazavana sy ny tari-dalana omeny. Jereo, ohatra, ny Fitaovana Fikarohana ho An’ny Vavolombelon’i Jehovah, eo ambanin’ilay lohatenikely hoe “Fampianarana nihanazava.” Ho hitanao ao fa nahitsy ny fanazavana sasany. Tsy nilaza i Jesosy hoe hanome sakafo ara-panahy tonga lafatra ilay “mpanompo mendri-pitokisana sy malina.” Iza tokoa àry io mpanompo io? (Mat. 24:45) Ahoana no ahafantarana fa ny Filan-kevi-pitantanana izy io? Handinika porofo telo isika. Ireo porofo ireo ihany no nahalalana ny filan-kevi-pitantanana tamin’ny taonjato voalohany.
13. Inona no porofo fa nampian’ny fanahy masina ny Filan-kevi-pitantanana?
13 Ampian’ny fanahy masina. Nisy zavatra tsy azontsika taloha tao amin’ny Soratra Masina. Nanampy ny Filan-kevi-pitantanana anefa ny fanahy masina, ka lasa azontsika tsara izy ireny izao. Eritrereto, ohatra, ireo fanazavana nahitsy nasaina nojerentsika tetsy aloha. Azo antoka hoe tsy olona no nanampy ny Filan-kevi-pitantanana hahalala sy hanazava an’ireny “zava-dalin’Andriamanitra” ireny. (Vakio ny 1 Korintianina 2:10.) Eken’izy ireo ilay tenin’ny apostoly Paoly hoe: “Lazaintsika koa izany zavatra izany, tsy amin’ny teny ampianarin’ny fahendren’olombelona anefa, fa amin’ny teny ampianarin’ny fanahy.” (1 Kor. 2:13) Be dia be ny fampianaran-diso nandritra ny taona maro talohan’ny 1919, sady tsy dia nahazo tari-dalana mazava ny mpanompon’i Jehovah. Matoa àry nitombo be ny zavatra nazava tamin’izy ireo nanomboka tamin’izay, dia satria nampian’ny fanahy masina ny Filan-kevi-pitantanana.
14. Inona no porofo fa manampy ny vahoakan’Andriamanitra ny anjely, araka ny Apokalypsy 14:6, 7?
14 Ampian’ny anjely. Torina eran-tany ny vaovao tsara, ary olona valo tapitrisa mahery no mitory azy io. Ny Filan-kevi-pitantanana no miandraikitra an’izany asa goavana izany. Misy vokany tsara io asa io satria manampy ny anjely. (Vakio ny Apokalypsy 14:6, 7.) Imbetsaka no nisy olona nivavaka mba hampian’Andriamanitra, ary nisy mpitory tonga tany aminy tsy ela taorian’izay. * Mitombo be koa ny asa fitoriana sy fampianarana eran-tany, na dia misy fanenjehana aza any amin’ny tany sasany. Tsy hisy mihitsy izany raha tsy manampy ny anjely.
15. Inona no tsy itovizan’ny Filan-kevi-pitantanana sy ny mpitondra fivavahana? Manomeza ohatra.
15 Miantehitra amin’ny Tenin’Andriamanitra. (Vakio ny Jaona 17:17.) Izao no voalaza tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Jona 1973 (anglisy): ‘Azo atao batisa ve ny olona mbola tsy niala tamin’ny sigara? Tsy mahafeno fepetra izy ireo, rehefa jerena ny Soratra Masina.’ Nanonona andinin-teny maromaro mifandray amin’izany ilay gazety, ary nanazava hoe nahoana no tokony horoahina tsy ho anisan’ny fiangonana izay tsy mety miala amin’ny sigara. (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1) Izao koa no voalaza tao: “Tsy hoe izahay no te handidididy na hanjakazaka amin’ny olona. Andriamanitra no nanome an’izany fitsipika hentitra izany, ary ampahafantariny ao amin’ny Teniny izany.” Misy fivavahana hafa manaraka tsara ny Tenin’Andriamanitra hoatr’izany ve, na dia sarotra amin’ny mpivavaka sasany ao aminy aza izany? Hoy ny boky iray momba ny fivavahana any Etazonia: “Ovaovan’ny mpitondra fivavahana kristianina matetika ny zavatra ampianariny, mba hifanaraka amin’ny hevitra tohanan’ny mpivavaka ao aminy sy tohanan’ny besinimaro.” Tsy manao hoatr’izany ny Filan-kevi-pitantanana, fa manaraka izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra rehefa hanapa-kevitra. Hita amin’izany fa i Jehovah no tena mitarika ny vahoakany.
“TSAROVY IREO MITARIKA EO AMINAREO”
16. Ahoana no ampisehoantsika hoe mahatsiaro ny Filan-kevi-pitantanana isika?
16 Vakio ny Hebreo 13:7. Azo adika koa hoe “miresaka momba an’i” ilay hoe ‘mahatsiaro.’ Rehefa mivavaka àry isika, dia afaka miresaka momba an’ireo mitarika eo amintsika, anisan’izany ny Filan-kevi-pitantanana. (Efes. 6:18) Mahatsiaro azy ireo isika raha manao izany. Eritrereto ny andraikitr’izy ireo, anisan’izany ny hoe manome sakafo ara-panahy ho antsika, miandraikitra ny asa fitoriana eran-tany, ary mitantana ny vola fanomezana. Tena ilain’izy ireo ny vavaka ataontsika, ka mila mivavaka matetika ho azy ireo isika.
17, 18. a) Ahoana no ampisehoantsika fa manaraka ny tari-dalan’ny Filan-kevi-pitantanana isika? b) Nahoana isika no tokony hazoto hitory?
17 Tsy amin’ny teny fotsiny anefa ilay hoe mahatsiaro ny Filan-kevi-pitantanana. Tokony hanaraka ny tari-dalana omeny koa isika. Anisan’izany ny tari-dalana omeny ao amin’ny boky sy gazety, ary any amin’ny fivoriana sy fivoriambe. Ny Filan-kevi-pitantanana koa no manendry ny mpiandraikitra ny faritra, ary ny mpiandraikitra ny faritra indray no manendry ny anti-panahy. Mahatsiaro ny Filan-kevi-pitantanana àry ny mpiandraikitra ny faritra sy ny anti-panahy, raha manaraka tsara ny tari-dalana omena azy ireo. Manaja an’i Jesosy, ilay Mpitarika antsika, isika rehetra raha mankatò sy manaiky an’ireo lehilahy notendreny hitarika antsika.—Heb. 13:17.
18 Mahatsiaro ny Filan-kevi-pitantanana koa isika, raha miezaka mafy manao izay azo atao amin’ny asa fitoriana. I Paoly rahateo nampirisika antsika mba hanahaka ny finoan’ireo mitarika eo amintsika. Tena manam-pinoana ny mpanompo mendri-pitokisana, ka mazoto mitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana sady manao izay hampielezana azy io. Manohana an’io mpanompo io ve ianao, ka manampy azy mitory? Raha manao an’izany isika, dia tena ho faly rehefa hilaza amintsika i Jesosy hoe: “Araka izay nataonareo tamin’ny iray amin’ny kely indrindra amin’ireto rahalahiko ireto no nataonareo tamiko.”—Mat. 25:34-40.
19. Nahoana ianao no tapa-kevitra ny hankatò an’i Jesosy Mpitarika antsika?
19 Manampy an’ireo mpanara-dia azy foana i Jesosy, na dia efa lasa any an-danitra aza. (Mat. 28:20) Fantany fa tena nanampy azy ho Mpitarika mahay ny fanahy masina sy ny anjely ary ny Tenin’Andriamanitra, tamin’izy tetỳ an-tany. Ampiany hoatr’izany koa àry ny mpanompo mendri-pitokisana. ‘Manaraka foana ny Zanak’ondry’ ireo voahosotra anisan’io mpanompo io, ‘na aiza na aiza alehany.’ (Apok. 14:4) Raha manaraka ny tari-dalana omen’izy io àry isika, dia mankatò an’i Jesosy Mpitarika antsika. Kely sisa izy dia ‘hitarika antsika ho any amin’ny loharanon’ny ranon’aina’, ka hiaina mandrakizay isika. (Apok. 7:14-17) Tsy misy mpitondra olombelona afaka mampanantena an’izany.
^ feh. 3 Toa efa fikasan’i Jehovah ny hoe hisy apostoly 12 ho “vato fototra” 12 iorenan’i Jerosalema Vaovao. (Apok. 21:14) Tsy nila nosoloana àry izay apostoly tsy nivadika mandra-pahafatiny.
^ feh. 8 Lasa Fikambanana Tilikambo Fiambenan’i Pennsylvanie ny anaran’io fikambanana io, nanomboka tamin’ny 1955.
^ feh. 14 Jereo ilay boky hoe ‘Torio Amin’ny Fomba Feno ny Fanjakan’Andriamanitra’, p. 58-59.